အနုပညာအနေဖြင့် ဂီတအပြင် ပန်းချီပါရေးဆွဲပြီး ပြပွဲများပြသနေသည့် နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ဟန်ထ - Yangon Media Group
”အနုပညာကို သီးသန့်ခွဲမထားဘူး။ ပန်းချီအနေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကာတွန်းအနေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မြူးဇစ်အနေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်ဆီက ထွက်လာတာအားလုံးက အတူတူပဲ”
အနုပညာအနေဖြင့် ဂီတအပြင် ပန်းချီပါရေးဆွဲပြီး ပြပွဲများပြသနေသည့် နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ဟန်ထူးလွင်(ခေါ်)ကျားပေါက်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပုံကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
မေး- ဒီနေ့ Myanmar Abstract Artists Art Exhibition ပန်းချီပြပွဲလေးမှာ ပါ ဝင်ပြသဖြစ်ပုံလေးကို ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ- ဒါ ကိုဇေလတ်ခိုင်တို့ လုပ်တာပေါ့။ ကိုဇေလတ်ခိုင်က ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ် တော်ပွဲတုန်းက စသိတာ။ ပြီးတော့ ရင်း နှီးသွားတာ။ ကျွန်တော်တို့ ပွဲမတိုင်မီ ဒီပွဲ လုပ်တုန်းက ကျွန်တော်က ဒီကိုရောက် လာဖူးတော့ နောက်တစ်နှစ်လုပ်ရင် ကျွန် တော် ဝင်ပါမယ်လို့ အဲဒီလိုပြောဖြစ်ရင်း နဲ့ ဝင်ပါဖြစ်တာ။
မေး- ပြပွဲမှာ ဘယ်နှကားလောက် ပြသ ထားလဲ။
ဖြေ- ပြပွဲမှာ ကျွန်တော် သုံးကားပြထား တယ်။
မေး- ပန်းချီကို အဆိုတော်တစ်ဦး မဖြစ် ခင်ကတည်းက ဝါသနာပါတာလား။ အဆို တော်ဖြစ်ပြီးမှ ဝါသနာပါတာလား။ ငယ် ဘဝကတည်းက စိတ်ဝင်စားတာလား။
ဖြေ- ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကာတွန်း လေးတွေပေါ့။ ကာတွန်းရုပ်တွေ ဆွဲချင် တယ်။ ရုပ်ပြတို့ ဘာတို့။ ကြီးလာတော့ လည်း ဆွဲဖြစ်တယ်။ ဒါကို အချိန်ပေးပြီး တော့ အစဉ်တစိုက် မလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူး ပေါ့။ ကျွန်တော်ကလည်း ဂီတလောက ထဲရောက်တာ စောတာကိုး။ ဒီနောက် ပိုင်း သုံး၊ လေး နှစ်လောက်ကစပြီးတော့ ကာတွန်းကို ပြန်စတယ်။ စာအုပ်ထုတ် လို့ရတဲ့အထိ ဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ ဆွဲရင်း ဆွဲရင်းနဲ့ ကာတွန်းကနေ ကာတွန်းဆရာ တွေနဲ့ သိလာတယ်။ ပန်းချီဆရာတွေနဲ့ သိလာတယ်။ တဖြည်းဖြည်း သိလာရင်း နဲ့ လုပ်ဖြစ်လာတယ်။
မေး- ပန်းချီစဆွဲကတည်းက ပန်းချီမှာ သရုပ်မှန်ဝါဒ Realism အနေနဲ့ ဆွဲတာ လား၊ Abstract အနေနဲ့ပဲ စဆွဲဖြစ်တာ လား။
ဖြေ- Realism တော့ မဆွဲဖြစ်ဘူး။ Realism နဲ့ နီးစပ်တာဆိုလို့ မျက်နှာကြီး တွေပဲ ဆွဲဖြစ်တာရှိတယ်။ မျက်နှာတစ် ခြမ်းပုံ။ ကျွန်တော့်မှာ Ism တွေ ခွဲခြားပြီး ဝင်ပြီးတော့ ခိုလှုံရလောက်တဲ့အထိ ဗဟု သုတမရှိဘူး။ ကျွန်တော်မှာ Animal Instead နဲ့ ဆွဲတာ။ တိရစ္ဆာန်အသိစိတ် နဲ့ပဲ ဆွဲတာပဲ။ အခြားပညာရှင်တွေလို Ism တွေ မပါဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ ခံစားချက် ရယ်၊ ကင်းဗတ်ရယ် အဲဒီကြားထဲမှာပဲ။
မေး- အခုပြသထားတဲ့ ပန်းချီကား သုံး ကားအကြောင်းကို ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ- ဒီမှာကျတော့ အစ်ကိုတို့နဲ့ ပြမယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ထူးထူးခြား ခြားလေး ကျွန်တော့်ပါစင်နယ်၊ တော် တော်လေးကို ပါစင်နယ်ဆန်ပါတယ်။ နာမည်က (၁)Gorilla Panic၊ နောက် တစ်ကားက (၂) THEY’RE COMING! THEY’RE COMING! နဲ့ (၃) This is permanent ရယ် ကျွန်တော့် ပါစင်နယ် Job ပေါ့။ ရှင်းပြရတာ အရမ်း ခက်တယ်။ ကျွန်တော့် ပါစင်နယ်ဆန်တဲ့ ကားသုံးကားပေါ့ဗျာ။ အရောင်တွေ အ များကြီး သုံးတယ်။ minus တွေ အများ ကြီး သိပ်မလုပ်ဖြစ်ဘူး။
မေး- ဘာကြောင့်မို့ ဒီကားတွေ ဆွဲဖြစ် တာလဲ။
ဖြေ- ဘာလို့ ဒီဟာကို ဒီမှာပြဖြစ်လဲဆို တော့ ကျွန်တော် ပုဂံကနေ ပြန်လာတော့ ပုဂံမှာ ယွန်းဆွဲတဲ့ အန်ကယ်ကြီးတွေနဲ့ ကျွန်တော် အသိဖြစ်လာတယ်။ သူတို့ဆွဲ တာတွေ Duda ဆွဲသလိုပဲတဲ့။ အဲဒါ သူ တို့ သင်ပေးလိုက်တာပေါ့။ အဲဒီကနေ ကျွန်တော် လိုက်ဆွဲကြည့်တာမျိုးပေါ့။ ပထမဆုံး သုံးကားပေါ့။ အဲဒါလေး ပြကြည့် တာ။ ကနုတ်တွေပါတယ်။ ကနုတ်အကျိုး တွေပေါ့။ ကျွန်တော်ဆွဲတာ ကျိုးတယ် ခင်ဗျ။ သူတို့ သင်ပေးတုန်းကတော့ မကျိုး ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က ကနုတ်ပုံ လည်း ဆွဲမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဆွဲတဲ့ပုံအတိုင်းပဲ။ သူတို့က ယွန်း ကို အောက်ထားပြီးတော့မှ အပေါ်ကနေ ခြစ်ချတာကိုး။ minus လုပ်ရတယ် ဆို တော့။ အဲဒါကို ကျွန်တော်က သဘော ကျတာကိုး။ ပန်းချီကိုကြည့်ရင် အချို့ က Subject ကို ရှာတယ်။ အချို့က Object ကို ရှာတယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန် တော်ထင်တယ်။ Abstract ရဲ့ သဘော က အဲဒါတွေအကုန်လုံး ဘာမှမသက် ဆိုင်ရတာ အဲဒီလိုနဲ့တူတယ်။ သေချာ မသိပါဘူး။ တစ်ကောင်ကောင်၊ တစ် ခုခု ကိုယ့်အဓိပ္ပာယ်သိပြီးသားကို ရှာဖို့ လုပ်လို့မရဘူးနဲ့ တူတယ်။
မေး- လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှား မှုတွေက ဘာတွေရှိလဲ။
ဖြေ- အခွေတွေလည်းရှိတယ်။ မနက် ဖြန် တောင်ကြီးသွားရမယ်။ Show တစ် ခုရှိတယ်။ ရန်ကုန်မှာလည်း Show တစ် ခုရှိတယ်။ မြူးဇစ်အတွက် ကျွန်တော့်ကို လုပ်ပေးမယ့်သူတွေလည်း ရှိတယ်။ မြူး ဇစ်က လုပ်စရာတွေရှိတယ်။ နောက်ထပ် ကြားထဲမှာ ဖောက်ဖောက်ပြီးတော့ လုပ် စရာတွေ ရှိတယ်။ ကျွန်တော် စာအုပ်တစ် အုပ် ထွက်လာစရာရှိတယ်။ ကျွန်တော့် ရဲ့ ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ် ထွက်ဦးမယ်ခင်ဗျ။ အရှေ့မှာ ကျွန်တော် သုံးအုပ်ထွက်ထား တယ်။ ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ အက်ဆေး တွေ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာပါတာကို ပေါင်းပြီး တော့ လုပ်ထားတာတွေ ပွထနေတာပဲ။ အဲဒါတွေကိုစုပြီးတော့ စာအုပ်လုပ်မယ်။ ငါတို့စာပေက အဲဒါ လုပ်ပေးနေတယ်။ နောက် ကာတွန်းတစ်အုပ် ထပ်ထွက်ဦး မယ်။
မေး- ဂီတအပြင်အခြား အနုပညာတွေ လည်း ဝါသနာပါတယ်နော်။
ဖြေ- ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်တော် သီးသန့်မခွဲ ထားဘူး။ တစ်ခုစီ မခွဲထားဘူး၊ အဲဒါတွေ အကုန်လုံး ဆက်သွယ်နေတာပဲလေ။ ပန်းချီအနေနဲ့ ထွက်လာရင် ထွက်လာ မယ်။ ကာတွန်းအနေနဲ့ ထွက်လာရင် လည်း ထွက်လာမယ်။ ကျွန်တော့်ဆီက ထွက်လာတဲ့ဟာတွေ အားလုံးက အတူ တူပဲ။ မြူးဇစ်အနေနဲ့ထွက် လာတာရှိမယ်။ ကာလာတွေအနေနဲ့ ထွက်လာတာရှိမယ်။ ထွက်လာချင်တာနဲ့ ထွက်လာပေါ့။
အခုလို ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေး ဇူးတင်ပါတယ်။
''လူကြမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ'' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား မကြာမီ ရုံတင်ပြသမည်